Maxay Tahay Sababta Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Dibadda aad u Fashilmay | Martech Zone
Maxay Tahay Istaraatiijiyadda Suuqgeyntaada Dibedda ah ay u Fashilantay
Isniin, Maarso 11, 2013 Isniin, Maarso 11, 2013 Douglas Karr
Waxaa jira jirraba kuwa naga mid ah oo ku jira warshadaha suuq geynta si loo yareeyo suuq geynta dibada. Xitaa waan aqriyay halka qaar ka mid ah suuqleyda soo gala ay dhaheen ma jirto baahi dambe oo suuq geyn ah. Run ahaantii, taasi waa qashin. Waa talo aad u xun ganacsi kasta oo raadinaya inuu ku fido suuqyo cusub kuna xirnaado rajada ay ogyihiin inay ka dhigi doonaan macaamiil aad u wanaagsan.
Haddii aad leedahay summad caan ah (sida in badan oo ka mid ah qorayaasha internetka iyo hay'adaha warbaahinta bulshada sameeyaan), waxaa laga yaabaa inaan loo baahnayn inaad taleefanka ka qabato oo aad qabow wacdo. Ereyga afka iyo u diritaanka ayaa kugu filnaan kara inay kaa caawiyaan inaad kobciso meheraddaada. Taasi maahan raaxo ay shirkado badan leeyihiin, in kastoo. Si labadaba loo kobciyo ugana adkaado isku dheelitirnaanta, shirkadaha badankood waa inay ku daraan istiraatiijiyad suuq-geyn dibadda ah Xitaa markaa, waxaa jira dad badan oo loogu yeero xirfadlayaal iib ah oo talo ka bixiya tiro xiriiro ah oo xiriir lala yeesho rajo kahor intaadan ka tegin.
Xeeladaha suuq geynta badankood way fashilmaan maxaa yeelay maahan kuwo ku adkaysanaya inay u yeeraan macaamiisha ku dhex jira sahamintooda muhiimka ah. Waxaan ka wada hadalnay tan Bill Johnson - oo ah aasaasaha Jesubi, a qalabka otomaatiga raadinta iibka iyo kafaalaqaadaha Martech.
Qayb ka mid ah sababta uu Bill ugu noqday aamin weyn ku adkaysiga xirfadda iyo sababta ay u dhisteen Jesubi waxay dib ugu laabanaysaa maalmahoodii hore Aprimo. Go'aanka waxaa la gaarey in loogu yeero suuqleyda ilaa 12 jeer in ka badan 10 illaa 12 asbuuc ah oo isku dayaya in ay ku helaan taleefanka si ay u wadaan wada hadal. Sababtoo ah Aprimo waxay bartilmaameedsanayeen kooxaha suuq geynta Fortune 500 waxay lahaayeen dad badan oo ay bartilmaameedsadaan.
Waxay sidoo kale ahayd mid aad iyo aad u adag in la helo rajada laga qabo in taleefanka laga qabto ama la soo celiyo fariin cod ah. Merrill Lynch wuxuu ku jiray liistadooda bartilmaameed ee ay haysteen 21 magacyada suuq geynta in la bartilmaameedsado… laga bilaabo CMO, loona wareejiyo VP ee Suuqgeynta Agaasimaha Suuqgeynta Internetka, iwm Agaasimaha Suuqgeynta Macaamiisha Gaarka ah ugu dambayntii wuxuu kajawaabay taleefankiisii ​​isku daygii 9aad. Wuxuu ahaa qofkii 18aad ee la bartilmaameedsado. Wuxuu aqbalay dalab ah inuu kulan yeesho, wuxuu isu beddelay rajo adag, wuxuuna watay qandaraas malaayiin doolar ah. Hadday joojiyaan wicitaanka 6 isku day ka dib ama kaliya ay u yeeraan 4 qof waligeen weligeen wadahadal lama yeelan lahayn.
Jesubi ayaa dhawaan xirey heshiis Xerox. Bixinta 'Bill' ayaa loo yaqaan 'VP of Sales' 10 jeer muddo 7 toddobaad gudahood ah. Waxay si dhab ah ugu xirtay isaga isku daygii 2aad :). Wuu sii wacay wicitaankiisii ​​10ki isku day ayay runti dhahday ma ihi qofka saxda fadlan wac SVP of Sales. Wakiilkeyga ayaa wacay, isku daygii 8aadna wuxuu qabtay taleefankiisa isagoo leh, "Waxaan ahay nin adag oo aan qabsado sidee u sameysay?" Wakiilka Bill ayaa sharaxay nidaamkiisa iyo sida Jesubi u caawiyay. Xerox waxay ka codsatay demo goobta isla wiigag yar kadib Jesubi wuxuu heystey 50 isticmaale.
Midkoodna tusaalooyinka kor ku xusan midkoodna kuma xirnaan laheyn suuq geynta maxaa yeelay rajadu ma raadineyso xalka. Midkoodna kama jawaabi lahaa farriinta codka. Midkoodna ganacsi lama la yeelan lahaa shirkadaha kala duwan haddii wakiillada loo yeero oo keliya 6 jeer ama dhammaan xiriirada 4. Awooddu waa iyada oo og in ay u baahan tahay adkeysi iyo in la ogaado waxa ku adkaysigaas noqon lahaa.
Jesubi waxay ku kordhisaa wax soo saarka iibka warbixinno xeel dheer iyo raad raadin wadahadal wax ku ool ah. Waqti badbaadi oo waxbadan ku iibi hal-guji shaashadaha wicitaanada, dabagalka otomaatiga, iyo aaladaha wax tabinta ee xoogga leh.
Tags: wicitaanka qabowCRMjesubimerrill lynchsuuq geyn dibedda ahotomaatiga iibkaiibka crmraadinta iibkaotomaatiga raadinta iibkaxerox
Waqtiga Ganacsi: Ha u horseedo jadwalka ballantaada xigta!
Xaaladda Xayeysiiska Bulshada
Mar 12, 2013 at 9: 54 AM
Waad ku mahadsan tahay had iyo jeer Doug, marka hore dhawaaqyadu waxay u eg yihiin xal otomaatig iib ah oo mudan in la sii ogaado, mar labaadna qoraalkaagu wuxuu sababay wadahadal wanaagsan oo ku saabsan bilowga iyo bulshada deegaanka.
Mar 12, 2013 at 10: 22 AM
Waxaa jira dhibic yareynta soo noqoshada. Macaamiisha B2B ee aan la shaqeyno waxaan ogaanay in kadib 8 isku day taleefan iyo wacyigelin cod ah, soo noqoshada ama kaqeybgalka howlgalka si aad ah hoos ugu dhacay. Adkaysigu dhammaantood waa wanaagsan yahay waana wanaagsan yahay illaa aad ka noqotid xanuun xanaaqa dameerka, taas oo dhaawaceysa aragtida shirkadda iyo sumadda. Dabcan waxaa jira waxyaabo ka reeban halkaasoo iibka “tababarayaasha” ay masraxa ka soo bixi doonaan oo ay ka hadli doonaan gudaha iibiyaha iibka ee sameeyay 87 isku day oo horumariyay iibka noloshiisa. Taasi waa marka laga reebo. Haddii qof i soo waco 12 jeer oo aanan ka jawaabin, waxaan diyaar u ahay inaan gantaal niyukleer ah ku soo rido ganacsigooda. Waa muhiim inaad ogaato goorta shaqada laga fariisanayo oo xiriirada la gelinayo barnaamijka kobcinta.
Mar 30, 2013 at 5: 22 PM
Marka hore, waxaan jecelahay inaan telefoonka kula hadlo. Sababta Sababtoo ah waxaan u sameeyaa si dhif ah, taasina waa naqshad. Haddii aan qof la hadlayo, caadi ahaan waan iibsanayaa ama iibinayaa wax. Waxaan helayaa ugu yaraan laba darsin wicitaan bishiiba oo aan doonayo inaan qaato - kuwa kale 2 ilaa 3 boqol (waxaan hubiyey nidaamkeena VOIP hadda) waa BS oo aan yasayo. Waxay u egtahay sida otomaatig raadinta iibka rajada inay kordhiso tiradaas. Aynu noqono qof daacad ah - taasi si fiican ugama bidhaamayso cidhifka dhamaadka kale ee khadka. Sababta Sababtoo ah ma aaminsani in qofna uu iigu yeeri doono xal aanan horey u eegin - oo haddii ay qiimeyso aan horayba ula xiriiray iyaga. Qaab-fikirkaan xiran, ee kalsoonida badan ayaa ah waxa sameeya qaar ka mid ah astaamaha shaqsiyad iibsadeheyga - Waxaan ahay korsade hore oo wax ku iibsada qiimo kuna doorbida kanaalada dhijitaalka ah - xitaa bulshada - cilmi baarista iyo dhisida xalka ganacsigeyga wada. .
Marka, ujeeddada halkan ka jirtaa waxay tahay iyada oo aan loo eegayn inta jeer ee laygu yeedho nidaam kasta, maahan kan aan doorbido - oo si saraaxad leh uma shaqeyn doonto, dadku way isku dayeen. Taasi macnaheedu maahan inaysan u shaqeyn doonin dadka kale, haddii xaqiiqda tusaalayaasha kor ku xusan ay muujinayaan inay sameyn doonto - si kastaba ha noqotee waxaan u maleynayaa inay sidoo kale muujineyso in jimicsiga shaqsi iibsade uu yahay runta ugu sareysa ee jimicsiga kala-soocida qulqulka ee dhammaan suuqleydu ka faa'iideysan karaan. Hal istaroog ma shaqeynayo dad kasta - mana lagu go'aamiyo cinwaanka shaqada, cabirka shirkadda ama xitaa iibsashada doorka - waxay kuxirantahay shaqsiyadda. Haddii xalku yahay suuqgeyn otomaatig ah, ama otomaatig raadinta iibka ma jiraan wax beddel u ah ogaanshaha cidda aad la hadleyso. Mar alla markii aad ka hesho taleefanka, wadahadalka ayaa u roonaan doona.
Justin Gray, agaasimaha guud